May 2020 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
May 19, 2020 /in Lallaba /by EOTC Afaan Oromo
Dn. Yooseef Baqqalaa
Hiikaa: Soorii Moosisaa
Seerri Kiristoos Maali dha?
Seerri Kiristoos Jaalala dha. Jaalli namni tokko kan nama biraa waliin kan walii walii isaa kan ittiin gaggeessu; walii yaaduu irratti kan hundaa’e jaalala laphee fi kennaa Afuuraa ti. Walitti dhufeenya gaarii namoota gidduu jiru irraa ka’uun tokko kan biraaf kan raawwatu waan gaariin jaalala dha. Nama biraaf kan Raawwannu jaalalli gaariin kun Waaqayyo biratti gatii guddaa qaba. Kanaafis walitti dhufeenya guyya guyyaa keessatti kan beela’e nyaachisuun, kan dheebote obaasuun, kan daare daara baasuun, kan rakkate gargaaruun, kan gadde jajjabeesuu fi hojiiwwan gaariin kana fakkaatan hundi jaalala namni namaaf qabu irraa kan ka’e dha. Hojiiwwan gaarii kana fakkaatan kan raawwatan hundaa Gooftaa keenya Qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos murteedhaaf yeroo dhufutti, “Eebbifamtoota ijoollee Abbaa Koo koottaa addunyaan yeroo uumamtee eegalee kan isiniif qophaa’e Mootummaa Koo dhaalaa! Hundumaa gadi kan ta’an obboloota Koo isaan kana keessaa isa tokkoof waan raawwattaniif akka Anaaf raawwattaniti.” jechuun gatii kabajamaa akka nuuf kennu Wangeelaan nutti dubbatee jira. Maat. 25:35-36
Nama jaalachuu fi nama gargaaruun jaalala ti. Waaqa jaalala kan ta’e Waaqayyoo biraa gatii argamsiisa. Qulqulluu Phaawuloos “Egaahoo yeroo yoo arganne nama hundaaf gaarii yaa raawwannu.” kan jedhe gaarummaan jaalalaan kan raawwatamu gatii Afuurawaa inni argamsiisu sirritti waan hubateefi dha Gal. 6:10. Jaalala kan jedhame kun namaaf waan gaarii hojjachuu, dadhabbina namaa illee haguuguun ykn dhoksuun raawwii ibsamu dha. Qulqulluu Phaawuloos isa kana ilaalchisee “Isin keessaa tokkoon tokkoo namaa ba’aa isa tokkoo haa baatu, akkasumas seera Kiristoos raawwadhaa!” jedhamneerra. Kanaafuu, seera Kiristoos kan jedhame jaalala dha. Kunis barsumsa hojiidhaan mul’atuu dha Gal. 6:2. Fayyisaan Keenya Iyyasuus Kiristoos jaalala Isaa gonkaa irraa kan ka’e ba’aa ilma namaa baatee duuti Isaaf kan malu osoo hin taane, foon keenya uffachuun du’a mo’ee ka’uun mo’icha akka nuuf kenne, hir’ina keenya keenya balleessaa keenya obsuun nama gara jireenyaatti gara Fayyinatti deebisuun jaalala gonkaa hojiidhaan ibsamee dha.
Jaalalli qooqa Ergamootaan dubbachuudhaa olitti kan kabajamee dha. Jaalalli dhugaan beekumsa fi arjoomina kamiyyuu ni caala waan ta’eefi dha. Jaalalli bu’uuraa jireenya kiristaanummaa akka ta’e Qulqulluu Phaawuloos 1ffaa Qor. 13:1-10 irratti jireenyi ykn qabsuurri jaalalaan hin mi’oofne kan hin fayyadne ta’uu isaa nutti himee jira. Sababni isaas “Jaalalli ni obsa, jaalalli namaaf gadda, jaalalli hin boonu, jaalalli ana qofatu jiraata hin jechisisuu, jaalalli waan hamaa hin yaadu, jaalalli dhugaa waliin yeroo hunda ni gammada, jaalalli hundumaa ni amana. Akkasumas jaalalli hin kufu.” jechuun nu barsiisee jira. Haala kanaan kan jaalalatuuf arjummaa taasisa, ni obsaafis. Kanaafuu, kan isaa illee osoo hin hafin ni dhiisaafi ykn ni kennaafi. Nama jaalatu akka hin dhabneef gadi of qabummaadhaan, garraamummaadhaan, obsaan of’eeggaanoodhaan ni jaalata. Eef. 4:2. Namni hunduu kan jaalatu arjummaa fi gara laafummaa qabu irraa osoo hin sassatin ni qooda, waan hundaanuu garaa hin jabaatu. Eef. 4:32
Namni Waaqayyotti amanu hundumtuu kan jaalalaa ta’uutu isa irraa eegama. Fannoo irraatti addunyaaf beenyaa ta’ee kan fannifame Fayyisaan Addunyaa Iyyasuus Kiristoos kan nu barsiise nama hunda jaalachuu akka qabnu dha. Bu’uurri baruumsa fi amantii amantaa Kiristaanaa jaalala kanaan ibsamuu qaba. Qulqulluu Phaawuloos Gal. 5:6 irratti “Kiristoos Iyyasuusiidhaan ta’uun amantii jaalalan raawwatamuu dha malee kittanamuu yookan kittanaamuu dhiisuun hin fayyadu.” jechuun nu barsiisa. Kunis amantii kan sochoosuu fi hojii gaariin akka hojjatamu kan taasisu inni guddaan jaalala dha. Kanaan alattis bilisummaa Afuuraatiif kan waamamne amantaa Kiristaanaa keenyaa fedhii foonii fi qoruumsa garaa garaatiin akka hin gufannee fi dhabeessa akka hin taane yeroo nu akeekkachiisu “Yaa obboloota isin fakkenyuummaadhaaf waamamtaniittu. Fakkeenyuummaan keessan fedha fooniif akka isin hin kennine. Garuu, jaalalaan walii walii keessaniif akka garbootaa ta’aa!” Gal. 5:13 jechuun akka of eeggannuuf nutti himee jira. Amantaa hojiidhaan ibsuuf jaalalli baay’ee murteessaa dha. “Haa ta’u malee yoo wal ciniintan, wal nyaattan illee akka wal hin balleessine of eeggadhaa!” Gal. 4:14 Kana irraa ka’uun jaalalli raawwii hojii amantaa ta’uu isaa hubanna.
Kanaafuu, gidduu keenya jaalalli jira jechuun tokkummaa fi wal hubachuun nu gidduu jira jechuu dha. Kana yoo ta’e immoo namoonni jaalala tokkoon jiraatu, waan tokko yaadu, kaayyoo tokkoof hojjatu, karaa tokko irra deemu. Akkasumas, laphee tokko ta’u. Wangeela tokkoon tajaajilaa Afuuraa ykn Mootummaa tokkoof kan waamamani dha. H.D.B. 1:14 “Laphee tokkoon ta’anii kadhachaa turani.” 1Phex 3:8 irratti Qulqulluu Pheexiroos “Dhuma irratti hundi keessanuu laphee tokkoon ta’aa gidiraan nama biraa isiniif akka ta’eetti fudhadhaa, akka obbolaatti wal jaaladhaa!” jechuun akka nu barsiise nutis waa’ee jaalalaaf jennee namoota wal jaalatan fakkaannee bultoo Waaqayyoo kan ta’e madda jaalala dhugaa haa taanu. Kanaafi dha Qulqulluu Phaawuloos Eef. 5:2 irratti “Jaalalaan deddeebi’aa, jaalala hordofaa!” kan nuun jedheef. Sababni isaas sossobaa kan hin qabne jaalalli dhugaa (gonkaa) diina ykn gufuu cubbuu waaan ta’eefi dha. Jaalalli hammeenya nu gidduuu jiru kan balleesu meeshaa afuura ti. Fkn. 10:2 irratti “Lolli mormii kaasti; jaalli garuu cubbuu haguugdi.” jechuun nu barsiisee jira. Akkasumas, Qulqulluu Pheexiroos ergaa isaa 1ffaa 4:4 irratti “Jaalalli baay’ina cubbuu ni uuwwisaatii, hunda dura cimsaati wal jaaladhaa!” nuun jedhee jira. Kanaafuu, jireenyi nuti jiraannus jaalalaan yoo hin mi’oofne hiika hin qabuutii nama jaalalaa taanee jaalalaan jiraachuu qabna.
Jaalala Akkamitti Hojiitti Hiikuu Qabna?
Qulqulluu Daawiit Faar. 132:2 irratti “Obboloonni tokkummaan yoo ta’an ni bareeda.” jechuun akka nutti hime waliif yaaduu laphee irraa madde, walgargaaruu, waliif gadduu, walumaa galatti laphee tokkoon ta’uu akka qabnu nu hubachiisa. Qulqulluu Yohaannisis 1ffaa Yoh. 4:7 irratti “Walii walii keessan jaaladhaa!” nun jedhee jira. Kanaafuu, jaalalli nu gidduu jiraachuu qabu jaala lafarraa isa boru badu jaalala yeroo gabaabaa osoo hin taane gatii hin badne kan nuuf kennisisu jaalala isa samii kan Afuuraa ta’uun nu hubachiisee jira. Akkasusmas, 1ffaa Yoh. 4:20-21 “Eenyumtuu Waaqayyo nan jaalaldha jechaa obboleessa isaa kan jibbu inni sobaa dha. Obboleessa isaa isa ijaan argu kan hin jaalanne kan ijaan hin argin Waaqayyoon akkamiin jaalachuu danda’aa? Waaqayyoon kan jaalatu obboleessa isaas akka jaalatu ajajni kun Isa biraa nuuf kennamtee jirti. Kanaafuu, kun ajaja Waaqayyoo ta’uu isaa haa beeknu.” Armaan olitti akkuma ibsame walii walii keenyaa akka jaalannu Waaqayyoo irraa kan nuuf keennamee dha. Bu’uura amantii Kiristaanummaa irratti kan dhaabbanne hundi keenyaa jaala gonkaa kanaan wal jaalachuu akka qabnu haa beeknu. Sababni isaas jaalalli samii fi Afuuraa ajaja Waaqayyoo raawwachuudhaan tajaajilaa amanamaa fi jaalatamaa ta’uu kan mirkaneessuu dha. Qulqulluu Pheexiroos ergaa isaa 1ffaa 1:22-23 irratti “Dhugaaf kan ajajamtan nuffiin kan keessa hin jirre jaalala obbulummaatiin lubbuu keessan jabeessaatii laphee keessan irraa wal jaaladhaa!” jedha. Qulqulluu Phaawuloos 2ffaa Qor. 6:3 irratti “Tajaajilli keenya akka hin qeeqamneef waan tokkonillee hin gufachiisnu. Haa ta’uu garuu, waan hundaanuu akka tajaajiltoota Waaqayyoo jaalala nuffii hin qabneeen of jabeessina.” jechuun jaalalli dhugaa gonkaa nuffii kan hin qabne ta’uu nu hubachiisee jira.
Kanaafuu, obboolota gidduu jaalalli jiru yeroo tokko mul’atee yeroo biraa kan badu, yeroo tokko daraaree waqtiin booda kan coollogu ta’u hin qabu. Kana caalatti amantii jabaa irratti biqilee, yeroo hundaa daraaree eebba Afuuraa fi arjummaa Waaqayyoo argamsiisaa kan jiraatu fi walitti fufaa ta’uu qaba. Kanaafidha Qulqulluu Phaawuloos 1Tes 3:13 “Nuti akkuma isiniif taanuu yeroo hunda walii waliif keessanii jaalalli qabdan haa baay’atu.” jechuun ibsa. Abbootiin keenya akka taasisan hunda jaalalli akka jabaatuu fi guddatuuf fiis akka buusuuf kadhaannaadhan kan deeggaram,ee of eeggannoodhan kan qabame ta’uu isaa hubanna. 2ffaa Phex. “Sababa kanaaf jabina agarsiisaa Waaqayyoon fakkachuun jaalala obbolootaa dabalaa!” jechuun jaalalli Afuuraa inni gonkaa yeroodhaa yerootti guddachaa deemuu kan qabu mi’eessituu jireenya Kiristaanummaa akka ta’e hubachuun jaalala nuffii irraa bilisa ta’e qabaachuun seera Isaa eeguun hojiin kan mul’atu akka nuuf taasisuuf kadhachuutu nu irraa eeggama. Kan kadhatan kan nama hin dhowwanne, kan itti himatan kan hin daganne Waaqayyo Gooftaan Abboota darbaniif kan kadhatame akka nuuf kadhatamu, nama jaalalaas akka nu taasisu, jaalala Isaatiinis jabaannee dhaaltuu Mootummaa Isaas akka nu taasisu fedhaa fi jaalala Isaa nuuf haa ta’u.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2020-05-19 08:19:512020-05-19 08:20:50“Seera Kiristoos raawwadhaa!” Gal 6:2
May 4, 2020 /in Barumsa Amantaa, Icciitii utubaalee shanan, Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Adeemsa jireenya dhala namaa keessatti dhalachuu, jiraachuu fi du’uun ta’iiwwan deddeebi’anii mul’atanidha. Dhimma kana ilaaluun namoonni tokko tokko jireenyi dhala namaa hanga lafa kana irratti jiruu fi deddeebi’u qofatti malee duunan faayidaa dhabeessa ta’a jedhanii kan yaadan jiru. Garuu jireenyi dhala namaa jireenya addunyaa kana irraa bira darbee akka itti fufu Manni Kiristaanaa keenya ni barsiisti. Barumsa ishee kanaanis barumsa Duuka Bu’ootaa irratti kan hundeeffattedha. Duuka Bu’aan Qulqulluu Phaawloos ergaa isaa gara saba Qoronxoositti erge irratti “Amma garuu Kiristoos warra du’an hundaaf angafa ta’ee du’aa ka’eera; duuti karaa namaa akkuma ta’e du’aa ka’uunis karaa namaa ta’eera. Hunduu sababa Addaamiin akkuma du’an hunduu ammoo Kiristoosiin du’aa ka’u” jechuudhaan dhalli namaa du’ee akka hin hafnee fi jireenya bara baraatiif akka ka’u nu barsiiseera. Barruu kana keessattis waa’ee du’aa ka’uu dhala namaa Du’aa Ka’uu Gooftaa Keenya Qoricha Keenya Iyyasuus Kiristoosiin nuuf labsame waliin wal bira qabnee barumsa Manni Kiristaanaa keenya nu barsiistu ilaalla.
Dhalli namaa du’aaf hin uumamne.
Uumamni dhala namaa du’ee tortoree akka hafuuf osoo hin taane jireenya bara baraa argachuun akka Waaqa isaa galateeffachaa jiraatuuf ture. Seenaa sirna uumamaa jalqabaa keessatti akkuma hubannutti duuti hin turre. Namni akkuma Ergamootaa akka bara baraan jiraataniif uumamani malee akka du’aniif hin turre. Waaqayyo nama bifa Isaatii fi fakkaatti Isaatiin yemmuu uumu; Afuura jireenyaas yemmuu irra bulchu; lubbuun isaa qofa jiraattuu bara baraa akka taatuuf osoo hin taane lubbuun isaa foon isaa wajjin tokko taatee hanga bara baraatti akka jiraattuufi dha. Kanas Waaqayyo dhala namaa akka bifa Isaa fi akka fakkeenya Isaatti uumuu isaatiin dhalli namaa jiraattota bara baraa akka ta’aniif uumamuu isaanii hubanna. Kanaafuu, Addaamii fi Hewaaniin uumee bakka jireenyi bara baraa jiru gammachuudhaan akka jiraataniif jannata keessatti isaan galche; dhukkubaa fi du’as hin beekani ture. (S.Uum.1: 26-30; 2: 8-9)
Kanaaf Manni Kiristaanaa keenya dhalli namaa du’ee tortoree hafuuf akka hin uumamne barsiisti. Waaqayyo du’aaf akka nama hin uumnes irra deddeebiidhaan ni ibsiti. Salamoon inni ogeesichi “Waaqayyo du’a hin uumne; bara baraan akka jiraatuuf uumama uume; badiin namootaa Isa hin gammachiisu” jechuudhaan nu hubachiisa. Dhalli namaa akka hin dune qofa osoo hin taane bakka duuti hin jirre akka jiraachaa tures “Awwaallis daangaa kana keessa hin turre” jechuudhaan nu hubachiisa (Xibab/Oggummaa. 1:13-16). Dhalli namaa du’aaf hin uumamne erga ta’ee duuti akkamiin dhufe? Gaaffii jedhu ilaaluun du’aa ka’uu dhala namaa hubachuuf nu gargaara. Sababni du’a dhala namaa Waaqayyo irraa fagaachuun ajaja Isaa cabsuu dhala namaati. Kanaaf ogeessichi Solomoon “Warreen Waaqayyo irraanfatan garuu sagaleedhaan Isa waamani; hiriyyaa isaaniis Isa taassisani; kanumaanis badani” jedhee dhalli namaa fedhaan du’a akka ofitti fide dubbata. (Xibab/Ogg. 1:13).
Duuti kan eegale Addaamii fi Hewaan seera uumaa isaanii cabsuun yeroo balleessaa hojjetan ture. (S.Uum. 2:17) kanaafuu, gatiin cubbuu jalqabaa du’a ta’e. (S.Uum. 3:16-19) Isaan seera uumaa isaanii yemmuu diigan; isaanis kabaja uumama isaanii jalqabaa irraa haqamani. Kennaan isaaniis isaan irraa mulqame; qullaa isaaniis hafani. Sana booda biyya bareedduu fi qulqulleettii taate keessaa ari’amanii biyya rakkoonii fi duuti irra jiru keessa jiraachuu eegalani. Yeroo sanaa eegalee duuti Addaamii fi Hewaan irratti injifannoo argatee bittaa isaa jala galche. Dhalli namaa Addaamii fi Heewaan irraa dhalatan hundi hirmaattotaa fi dhaaltota balleessaa isaanii ta’ani. Kana waan ta’eef Duuka Bu’aan Qulqulluu Phaawuloos “Sababa nama tokkootiin cubbuun gara addunyaatti gale; cubbuudhaanis duuti seene; akkuma kanaa hunduu waan cubbuu hojjetaniif duuti dhala namaa hunda bira ga’e” jechuun dhufaatii du’aa hubachiisee jira (Room.5:12).
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2020-05-04 14:04:422020-05-04 14:07:44“Amma garuu Kiristoos warra du’an hundaaf angafa ta’ee du’aa ka’eera” (1ffaa Qor. 15: 12-32)